Famonoana zaza tamin’ ny takon-kenatra :: Mpianaka nogadraina tamin’ny fahafatesan’ankizy efa-taona • AoRaha
Natolotra ny Fampanoavana, tamin’ny zoma lasa teo, ny ankizilahy, 14 taona, sy ny reniny rehefa voarohirohy tamin’ny fahafatesana zazavavikely, efa-taona, teny Ambodivoly, Itaosy Hopitaly, tamin’ny alakamisy 26
Samy naiditra am-ponja eny Antanimora izy mianaka. Fantatra, araka ny valin’ny famotorana nataon’ny zandary fa ilay ankizilahy no nikasi-tanana sy namono an’ilay zazavavikely. Niray tsikombakomba taminy tamin’ny fanariana ny razana kosa ny reniny.
Nokendaina tamin’ny takon-kenatrany i Manana Estelah, ilay zazavavy, efa-taona, nindaosin’ny fahafatesana ka anenjehana an’iretsy mpianaka voalaza etsy ambony. Tsy hita popoka sy nifampitadiavin’ny fianakaviana io zazavavy io, tamin’ ny harivan’ny 24 desambra 2019 lasa teo. Roa andro taorian’izay, hita tao anaty rano, teny Antanetikely Ampitatafika ,ny vatana mangatsiakany.
Niroso tamin’ny fanadiha­diana ny zandary noho ny ahiahia fisiana vono olona tamin’ io trangana fahaverezan-jaza io. Nisy ihany koa ny olona noahiahian’ny fianakaviana. Voalaza fa tsy hita teo an-toerana, nanomboka tamin’ ny fotoana nahitana ny razana, ireo olona noheverina ho namono.
“Tonga teo an-tanàna, tamin’ ny talata 7 janoary, ireo olona noahiahiana. Nantsoina haingana ny zandary hisambotra azy ireo”, araka ny fanam­pim-baovao avy amin’ny fianakaviana.
Tamin’ny famotorana no nahafantarana ny zava-nisy sy ny antony nanaperana ny ain’i Manana Estelah. “Mpiray vodirindrina amin’io zazavavy namoy ny ainy io ny ankizi­lahy iray, 14 taona. Hitan’itsy farany nilalao teo an-tokotany ilay zazavavy ka notambatambazany hanaraka azy. Nokasainy haolana, avy eo. Tsy vita ny filan-dratsiny ka no­kendainy sy notolominy ilay zazavavikely. Maty tsy tra-drano itsy farany. Hitan’ny renin’io ankizilahy io izany, taorian’izay. Nobatain’izy mianaka sy nariana tany anaty rano ny razana”, hoy ny zandary eny Fenoarivo nanao ny fanadihadiana.
Tahotra ny aretina « Coronavirus » Mpianatra malagasy iray avy Shina tafody an-tanindrazana
Fifandonana teo amin’ny tetezana Nandratra mpandeha am-polony ilay fiara nivarina tao anaty rano
Fandrobana teny Ambodin’Isotry Lehilahy iray voasambotra, taorian’ny fanafihana fivarotana
Lozam-piarakodia Vehivavy maty voatsindrin’ ny kamiao nitondra vary
Nifamihina izy efa-mianaka niara-maty tototry ny tany
Antsirabe :: Naiditra am-ponja ilay ray voatondro ho namono ny zanany roa
Halatra sy vono olona Tovolahy maty nihantona, avy nanindrona antsy ny namany
Loza teny Ampitatafika Fiara nitondra masera nivarina tany an-tanimbary
Vono olona Vehivavy teôlôjianina, 70 taona, maty nisy nanolana
Fahitana razana Fatin-dehilahy nitsingevana teny an-tanimbary